गुड बाई शंखपार्क - Naya Patrika
गुड बाई शंखपार्क
साउन १, २०७४ शंखपार्कस्थित डेराबाट आज सरेँ, जहाँ मैले करिब एक दशक बिताएँ । सक्रिय जीवनको यो अवधिलाई एकपटक फ्ल्यासब्याकमा हेर्न मन लाग्यो ।
त्यो ठाउँलाई कोही धुम्बाराही भन्थे, कोही चप्पल कारखाना भन्थे, अलि टाढाका कसैले त महाराजगन्ज पनि भने । यी तीनै ठाउँबाट नजिक पर्छ, म बसेको त्यो गल्ली । त्यो गल्लीको नाम वास्तवमा हो ‘प्रगतिटोल मार्ग’ । प्रगतिटोल मार्ग पनि कहीँ नाम हुन्छ ? तर छ । तर, मैले राखेको नाम थियो, ‘शंखपार्क’, किनकि शंखपार्कसँगै जोडिएजस्तै थियो, म बसेको घर र गल्ली । त्यसैले ठेगाना सोध्नेजति सबैलाई म ‘शंखपार्कमा बस्छु’ भन्थेँ । मान्छेहरू मर्निङवाक गर्ने, एक्सरसाइज गर्ने, भेटघाट गर्ने त्यो पार्कको नामबाट मैले त्यस ठाउँकै नाम राखिदिएँ ।
त्यहाँबाट सर्दा एकैतालि दुई ठाउँबाट सरेको महसुस भयो । एक त घरबाट, अर्को त्यो ठाउँबाट । घरसँग जत्तिकै प्रेम ठाउँसँग पनि छ मलाई । सं. २००८ को जुलाई महिना ! विशालनगरको एक कर्नेलको घरमा ११ महिना बिताएर पद्मा दिज्जूको (मेरी फुपू पर्नेकी छोरी) त्यस घरमा सरेको हिजैझैँ लाग्छ ।
सं. २००७ मा आफ्नै घरबाट विशालनगरको डेरामा सर्दा परिवार (पत्नी ईश्वरी, छोराहरू दीपेश र अभिशेष) नेपालबाहिर थिए, अहिले पनि छोराहरू बाहिरै छन् ।
परिवारविहीन एक्लै बस्नुको एकाकीपन र असुरक्षाबाट बच्न नातेदारको त्यो घर रोज्नुको पहिलो कारण थियो । अर्को, प्रायः सबैजसो नातेदारको निवास शंखपार्कबाट टाढा थिएन । बहाल पनि विशालनगरको घरको तुलनामा एकतिहाइले कम थियो ।
त्यस घरभित्र प्रचण्ड गर्मी महसुस कहिल्यै भएन । यो नौ वर्षको अवधिमा पंखा नचलाई नहुने परिस्थिति आइपरेन । जाडोचाहिँ थियो, जुन हिउँदमा काठमाडौंका अरू घरमा पनि हुन्थ्यो । ईश्वरी गुनासो गर्थिन्, ‘यस घरमा जाडो बढी छ,’ । तैपनि, बिजुलीको हिटर हामीले चलाएनौँ, बिजुलीको शुल्क घरबेटी र हामी दुवैले बराबर तिर्ने भएकाले उहाँहरूलाई असजिलो पर्ला भन्ने लाग्थ्यो ।
२०१२ को हिउँदमा ईश्वरीले घरको बाहिर तर कम्पाउन्डभित्र दक्षिणपूर्वी कुनामा एउटा सानो ठाउँ पत्ता लगाइन्, जहाँ दिनभर घाम लाग्थ्यो, हावा चल्दैनथ्यो ।
त्यसपछिका हिउँदहरू उनले जिउलाई खुम्च्याएर त्यही सानो कुनामा घाम तापेर बिताइन् । तर, म धेरै बेर टिक्न सक्दिनथेँ । एक पाखे भएर होला, घाम चर्को हुन्थ्यो । सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् २०१६ को हिउँदमा कतैबाट सानो ब्रान्डी नामक लभ्ली कुकुर हामीलाई आइलाग्यो । ब्रान्डी पनि घाम ताप्ने ठाउँ अन्त नपाएर हो वा सामीप्यता जनाउन हो, चुनुमुनु गर्दै त्यही कुनामा आएर टाँसिएर बस्थ्यो ।
छोराहरूको स्कुल पनि नसकिँदै मैले कृषि विकास बैंकबाट अवकाश लिनुपरेको थियो । त्यस बैंकको प्रमुख पदबाट समय पुगेर अवकाश लिँदा दीपेश स्कुलको नौ क्लासमा र अभिशेष पाँच क्लासमा थिए । ईश्वरीको प्रथम श्रेणी अधिकृतको जागिर कृषि विकास बैंकमै थियो । बच्चाहरूसँग क्यानडा जान उनले पछि जागिर छाडिन् ।
आम्दानीको नाममा बैंक छाडेको पाँच वर्षपछि खान थालेको बिमा समितिको नयाँ जागिर थियो, त्यो पनि शंखपार्क सरेको नौ महिनामै गयो । तर, स्कुलबाट कलेज, स्वदेशबाट विदेश जान खुट्टा उचालिरहेका बच्चाहरूको पढाइखर्च बढ्दो थियो । खर्च धान्न चाबहिलको घर त बेच्यौँ पनि । कतिले प्रतिक्रिया दिए, ‘सम्पत्ति बेचेर ठीक गरेनौ, यति जोड्न अब कहिले सक्छौ ?’ ठीक हो, अब जोड्न नसकिएला । तर, सम्पत्ति जोड्नकै लागि हो र यो जीवन ?
आफू मात्र हुँदा भुइँतला भाडामा लिएको थिएँ, जहाँ दुई साना बेडरुम, ठिक्कको ड्रइङ रुम, एउटा किचेन र एउटा वासरुम थियो । वासरुम र ड्रइङ रुमको बीचमा एउटा डाइनिङ स्पेस थियो, जहाँ कतैबाट पनि उज्यालो नछिर्ने भएकाले २४सै घन्टा बत्ती बाल्नुपथ्र्यो । त्यही डाइनिङ रुमको एक छेउमा हामीले जुत्ताको ¥याक राखेका थियौँ, सायद यो हाइजेनिक व्यवस्था होइन ।
तर, अरू स्पेस थिएन ।
ईश्वरी पनि २०११ मा काठमाडौंमा बस्न थालेपछि त्यो घर आफसे आफ साँघुरो भयो । डेरामा बस्नुलाई ईश्वरीले ‘इन्फेरियर लिभिङ’ ठानिन् । तर, मलाई प्यारो थियो, त्यो डेरा र ठाउँ । उनले त दुई वर्षअघि नै आफ्नै घरमा फर्किने निर्णय गरेकी थिइन् । यसमा हामीमा विवाद भयो । ‘घर कसरी चलाउँछौ ?’ सोधेँ मैले । तरलताको अभाव थियो हामीमा । उनले विदेशमा रहेका छोराहरूसँग पैसा माग्ने कुरा गरिन् । ‘हरेक महिना छोराहरूबाट हामीले आशा गर्ने ?’ मैले यो गलत हुने बताएँ ।
‘उसो भए भगवान्ले पु¥याउनेछन्’ भनिन् ।
यसपछि म कड्किएँ । बोल्दै थिइन्, हिँडे म । त्यसपछि पनि दुई वर्ष थप बसियो डेरामा । डेरामा को बसेको छैन ? हाम्रा पुस्ताका सबै (काठमाडौंका स्थानीयबाहेक) कुनै न कुनै समयमा डेरामै थिए । सं. २००७ मा जब हामी आफ्नो घर बहालमा दिएर विशालनगरको डेरामा जाँदै थियौँ, भर्खरै एसएलसी गरेको १६ वर्षको कान्छो छोराले उसको ममीको कुराले म झोक्राएको देखेर भनेको थियो, ‘डोन्ट ओरी बुबा । पैसा नभएपछि घर बहालमा दिनप¥यो नि ।’ अचम्म लाग्यो, हामी आफ्नो आर्थिक समस्या बच्चाहरूबाट लुकाउने प्रयासमा हुन्थ्यौँ, तर यो त उनीहरूमा छताछुल्ल भइसकेको रहेछ । मेरो आँखा आँसुले भरियो ।
त्यो घर सुरुमा फ्ल्याट ढाँचाबाट बनेको होइन, पछि बाहिरबाट भ¥याङ झिकेर माथिल्लो तलामा जान सकिने बनाइएको हो । ओरिजिनल भ¥याङले गर्दा माथि र तलको बाटो ह्वांगै थियो । भेनिस्ताले बारिएको थियो, पछि त त्यही भेनिस्तामा पनि प्वाल प¥यो । तल बोलिएको माथि सुनिन्थ्यो । आखिर प्राइभेसी भन्ने पनि कुनै चिज हुन्छ, जुन हरेक परिवारलाई चाहिन्छ ।
दुई तला चलाएकाले घरबेटीहरूलाई भने यो समस्या थिएन । करिब १२ वा १ बजेपछि घरबेटीलाई भेट्न मान्छेहरू आउने फ्रिक्वेन्सी बढ्थ्यो, ढोकाको चर्को घन्टी बज्न थाल्थ्यो, तारन्तार । जागिर नहुँदा र घरै बस्नुपर्दा यो डिस्टर्बिङ फ्याक्टर थियो । ईश्वरी त ‘यो घरमा किताब पढ्न सकिएन’ भन्दै एकताका कमलादीको प्रज्ञा भवनको लाइब्रेरीमा दिन बिताउन थालेकी थिइन् । बिहान बसमा एक्लै जान्थिन्, साँझमा उनलाई लिन म एकेडेमी पुग्थेँ ।
मर्निङवाकका साथीहरूको घरमा चिया वा खाजा वा खाना खुबै खाएँ । तर, दिमागमा चसक्क बिझ्ने कुरा छ (रेस्टुरेन्टमा हाँस्दै धेरै कप कफी खाए पनि स्पेस अभावकै कारणले मैले मित्रहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्ने सन्दर्भ जुटेन । हाम्रो बसाइको स्तर सरदर थियो । तर, ‘न्यूनतम’ पनि नभएको लघुताभास हुन्थ्यो, कुनै वेला ।
प्रगतिटोल मार्ग छाडिसक्दा अहिले केही पश्चातापहरू दिमागमा आए– ९० वर्षकी मेरी मुमाको निवास १० मिनेटको पैदल हिँडाइमा थियो । त्यहाँ राति अबेरसम्म कुरा गरेर बस्ने मेरो रहर आफ्नै कारणले पूरा भएन । हिँडेरै फर्किन सक्थेँ । तर, अब सवारीचालकलाई अबेरसम्म नराखी यो सम्भव छैन । डेनमार्कका अस्तित्ववादी दार्शनिक सोरेन किर्कगार्डले मानव जीवनको जटिलतामा प्रकाश पार्दै भनेको कथन सम्झिन्छु, ‘मान्छेले आफ्नो विगतलाई त राम्ररी बुझ्छ, तर उसले भविष्यमा बाँच्नुपर्छ ।’
निवासबाट पाँचै मिनेटमा पुगिने ओलिभ एन्ड बासिल रेस्टुरेन्ट थियो, जसलाई हामी ‘ओलिभ’ भन्थ्यौँ । तीन वर्षअघि रमाइलो घटना ओलिभमा भयो । साँझ ४–५ बजेतिर मर्निङवाकका साथी विवेक निरौला (अहिले जापानमा) र म कफीको लागि त्यहाँ पुग्यौँ ।
भोक लागिरहेको थियो, एउटा भेज मःम पनि मगायौँ । त्यही वेलामा मर्निङवाकका अर्का मित्र कल्पना भाउजूले फोनमा भन्नुभो, ‘हामी पनि ओलिभ आउँदै छौँ ।’ उहाँ आउन लागेकोमा त हाम्रो आपत्ति भएन । तर, भेज मःम एउटा मात्र मगाइयो, र अर्को मगाउन हामीसँग पैसा थिएन । घरबाट टाढा नभएकाले खल्तीमा धेरै पैसा बोकिएको थिएन । ‘अलि ढिलो गरेर आउनुभए हुन्छ,’ भनेँ मैले ।
‘हैन, किन र हामी त ए–वान (ओलिभबाट २०० मिटर) नजिकै आइपुगिसक्यौँ,’ भाउजूले भन्नुभयो ।
‘हामी भन्नाले को–को भाउजू ?’ मैले सोधेँ ।
‘सर (श्रीमान्) र म ।’ जवाफ फर्कियो ।
मैले विवेकलाई हेरेँ, उसले मलाई हे¥यो ।
मैले सोधेँ, (म विवेकलाई तिमी भन्ने गर्थें) ‘तिमीसँग पैसा छ त अर्को भेज मःम मगाउन ? कममा पनि दुई प्लेट त चाहिएला, चारजनाको लागि ।’
‘कफी मात्र खान हिँडेको, छैन दाइ,’ विवेकले जवाफ दियो ।
‘अब के गर्ने त ? एक प्लेट भेज मःम चारजनाले बाँड्न त गाह्रै होला,’ म गम्भीर भएँ ।
‘के गर्ने त दाइ ? जे होला,’ विवेकले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।
‘तिमी तल (रिसेप्सन र किचेन भुइँतलामा थियो, हामी पहिलो तलामा थियौँ) गएर दुईवटा काम गर यार । एउटा त भेज मःम छिटो भन । अनि, बाहिर निस्केर उहाँहरूलाई केही गरेर अलमल्याऊ, ताकि म आफ्नो भाग मःम खाइसकूँ ।’
‘अनि मेरो भाग नि दाइ ?’ उसले सोध्यो ।
‘त्यसैबाट बाँड्नुपर्ला, अब के गर्नु ? तिमीलाई भन्दा मलाई बढी भोक लागेको छ । तिमी त कफी मात्र खाने भन्थ्यौ नि, घरमा खाजा खाएर आएको जस्तो छौ ।’
‘हैन दाइ, खाएको छैन,’ विवेकले के यति भन्न भ्याएको थियो, ओलिभको बेयरा प्रेम भेज मःम लिएर भ¥याङबाट उक्लिएको देखियो, पछिपछि भाउजूहरू पनि । म त बेहोस भएँ, तर सम्हालिएँ । पेट कराउन थालेको थियो, तर मःम नबाँडी भएन । तीनजनाले बाँड्यौँ । भाउजूले चाहिँ बुझ्नुभो, मःमतिर हात बढाउनुभएन ।
त्यो ठाउँको एक अर्को फाइदा भयो मलाई । कुनै समारोहमा डान्सको कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दा लुक्ने गर्थें म, संकोच लाग्थ्यो । आफूलाई डान्सको लागि तानिदेलान् भन्ने डर हुन्थ्यो । यसैले धेरै पहिलेदेखि डान्स क्लासमा जाने रहर थियो, तर एक्लै जान भएन, डान्स स्कुल पनि नजिक हुनुप¥योे ।
पछिल्लो ६ महिना समूहमा डान्स स्कुल (आस्था कला केन्द्र) जाने अवसर मिल्यो, अनौपचारिक गफगाफमा डुब्ने मर्निङवाकका साथीहरूमध्ये चारजना तयार भयौँ । त्यहाँ जाँदा बिहानको समयमा थोरै भए पनि स्किल र एक्सरसाइज दुवैसँग एकैपटक भेट हुन्थ्यो ।
आस्था कला केन्द्र नारायणगोपाल चोकमै थियो, जहाँ पुग्न मेरो निवासबाट बढीमा ८ मिनेट लाग्थ्यो । ६ महिनासम्म त्यहाँ जाँदा सिकिएको खासै महसुस त भएन, दीर्घकालीन कोर्स लिनुपर्ने रहेछ । तर, संकोच हट्यो ।
‘सिक्ने कामलाई उमेरले छेक्दैन,’ पश्चिमाहरू यसैमा विश्वास गरेर प्रगति गर्न सफल भए । हामी एउटा जागिरबाट अवकाश पाउनासाथ ‘बूढा भयौँ’ भनेर हिम्मत हार्छौं । यो गलत विश्वास हो, जसलाई हामीले चिर्नैपर्छ । आफूलाई मन पर्ने नयाँ चिज गर्न कहिल्यै पनि ढिलो हुँदैन । नयाँले जीवनमा ताजापन ल्याइदिन्छ र स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥याउँछ । जे गरिराखिएको छ, त्यसैमा अल्झिराख्नु जीवनको मर्म नबुझ्नु हो ।
त्यहाँको बसाइको आज अन्तिम बिहान, मर्निङवाकपछिको क्षण । यो असामान्य बिहानीमा पनि सामान्य ढंगले हामी मर्निङवाकका साथीहरू ओलिभमा बस्यौँ, कफी खायौँ र सामान्य कुराकानीमै सीमित भयौँ । मित्रहरू हिजो–अस्तिजस्तै छट्टिए, मानौँ म त्यहाँबाट आज सर्न लागेकै छैन । मनमा खुल्दुली मच्चियो । के–के न मैले मात्र ठानेको रहेछु, यो मित्रतालाई । वियोग त मेरो मात्र भएको रहेछ ।
धत् ! दिक्दारीमा फसेँ म । एउटै मित्र शेरबहादुर कार्की (एसपी सा’ब) आफ्नो घर जाने बाटोलाई छाडेर दुई पाइला वरसम्म पु¥याउन आउनुभो, मेरा लागि विशेष यही मात्र भयो । तुरुन्त अमेरिकी लेखिका हेलेन केलरलाई सम्झिएँ । उनी भन्थिन्, ‘सुखको एउटा ढोका बन्द हुँदा मान्छेका लागि अर्को ढोका खुल्छ, धन्दा नमान ।’ यही सम्झेर चित्त बुझाएँ ।
एसपी सा’बसँग छुट्टिएर आज जब निवास पुगेँ, पद्मा दिज्जूलाई माथिबाट हुत्तिएर तलतिर ओर्लिएको देखेँ । ‘म त बाझ्न आएको’ दिज्जूका यी शब्दहरू मेरो कानमा प¥यो । कहिल्यै नभएको के भएछ भन्ठान्दै घरभित्र पसेँ ।
सोधेँ, ‘के भयो दिज्जू ?’
‘तिमीले मेरो नन्दसँग हिजो हामीभन्दा राम्रा मान्छे यहाँ बस्न आउँछन् भनेछौ भाइ, यो तिमीले के भनेको हो, मलाई बुझाऊ । तिमीभन्दा राम्रो मान्छे मेरा लागि को होला ?’ दिज्जू आवेशमा थिइन्, तर अनुहारचाहिँ त्यति बिग्रेको देखिनँ ।
‘आवेशमा नआइस्यो हजुर, कुरा त्यति गम्भीर छैन । हजुरको नन्द हिजो घरको ढोकानिर भेट भएको थियो । पोकापन्तुरा बाँधेको देखेर अब को आउने होला यस घरमा ? भनिस्यो । मैले चिन्ता नगरिस्योस्, राम्रो मान्छे आउँछन् हामीभन्दा भनेर ठट्टामा हाँसेको हो ।
दिज्जूले चाँडै कुरा बुझिन्, शान्त भइन् ।
अनि दिज्जूसँगै माथि उक्लिएँ । घरको सिरान तलाको भान्छानजिकैको कोठाको कुर्सीमा बसेर पद्मा दिज्जू र मैले एकछिन भावुक क्षणको आदान–प्रदान ग¥यौँ । दुवैले त्यो घरमा सरेको वेलालाई पृष्ठभूमिमा राखेर केही क्षणहरू स्मरण ग¥यौँ । छुट्टिने वेलामा हामी दुवैलाई गाह्रो भयो । दिज्जूलाई मैले भनेँ, ‘यो घरमा बसाइको अवधि सकिँदा नरमाइलो लागिरहेको छ ।’
दिज्जूले सुस्केरा हाल्दै भनिन्, ‘सबै कथाको ह्याप्पी एन्डिङ नहुने रहेछ भाइ ।’ मैले उनको अनुहार हेरेँ । कता–कता महसुस भयो, यत्रा वर्षहरूमा पनि दिज्जूलाई गुन लगाउने कुनै काम गर्न सकिनँ मैले, जसले मेरो सम्झना भइरहोस् उनलाई । पीडा महसुस भयो ।
‘यत्रा वर्षहरूमा जानी वा नजानी चित्त दुखाउने काम गरियो कि ?’ त्यस्तो भएको भए माफी दिन मैले दिज्जूसँग आग्रह गरेँ । दिज्जू एकाएक बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्, गला अवरुद्ध भएको देखेँ । हात हल्लाएर मबाट चित्त दुखाउने काम नभएको संकेत गरिन् ।
हामी दुवैको आँखामा आँसु टल्पलायो । एकछिन सन्नाटा छायो कोठामा । दुवै बोलेनौँ । आँसु आँखाबाट गह हुँदै जब झर्न खोज्यो, त्यहाँ बस्न नहुने ठानेर जुरुक्क उठेँ । आउन खोजेको भक्कानोलाई सकभर रोक्दै मन्द आवाजमा ‘म गएँ’ भनेँ । यसपछि दिज्जूको बोलीलाई नकुरी निमेषभरमै दुई भ¥याङ ओर्लिएँ र गाडीनिर आइपुगेँ । अनि केही नसोची गाडी कुदाएँ, बुढानीलकण्ठको दिशातिर …।
गुड बाई शंखपार्क र साथीहरू !